डायमनसम्शेर राणा - विकिपिडिया
(डायमनशमशेर राणा बाट पठाईएको)
डायमन सम्शेर राणा
(१९१८-०७-०५)५ जुलाई १९१८
तानसेन दरबार, पाल्पा जिल्ला, नेपाल
११ मार्च २०११(२०११-०३-११) (९२ वर्ष)
वसन्ती (उपन्यास) (1948)
सेतो बाघ (उपन्यास) (1970)
डायमनशमशेर राणा (१९७५-२०६७) नेपाली साहित्यकार तथा ऐतिहासिक उपन्यासकार हुन। वि.स. १९७५, आषाढ २१ गते, पाल्पामा जन्मेका यिनले नेपाली साहित्यमा राणाकालिन पृष्ठभूमिमा ऐतिहासिक उपन्यासहरू लेखेका छन्। उनको उपन्यास बसन्ती र सेतो बाघ मा आधारित चलचित्र निर्माण भईसकेको छ। "सेतो बाघ" नेपालको ऐतिहासिक उपन्यास जगतमा एक उत्कृष्ट उपन्यासको रूपमा लिने गरिन्छ। सेतो बाघमा राणाकालिन षड्यन्त्र तथा शक्ति संघर्ष देखाइएको छ। यसमा जंगबहादुरका सन्तानहरू कसरी शक्तिबाट हटाइए भन्ने वर्णन गरिएको छ। सेतो बाघ अङ्ग्रेजी, फ्रेन्च लगायत विश्वका विभिन्न भाषामा पनि अनुवाद भएको छ।
२ संक्षेपमा डायमनशमशेर
४ यो पनि हेर्नुस्
उनको पहिलो कृति वसन्ती (उपन्यास) वि.सं. २००५ सालमा प्रकाशित भएको थियो ।
संक्षेपमा डायमनशमशेर[सम्पादन गर्ने]
बाबु बुधशम्सेर राणा र आमा मोहनकुमारीको पाँचौ अर्थात् कान्छो सन्तानको रूपमा पाल्पाको ठुटेपीपलमा वि.सं. १९७५ सालको असार २२ गते मेरो जन्म भएको हो। मेरो बाजे पाल्पाको बडा हाकिम भएर त्यता बस्दा हाम्रो परिवार उतै थियो र त्यसैबखत मेरो जन्म पाल्पामा भयो र ६ महिनाको शिशुअवस्थामै म थापाथली (काठमाडौं) ल्याइएँ। सम्पन्न राणा परिवारमा कान्छो छोरोको रूपमा जन्मिएकोले मेरो बाल्यकाल कुनै कमी नभई बित्यो। सबैले मप्रति चासो लिन्थे रे तर यसलाई पढाउनुपर्छ भनेर चाहिँ कसैले सोचेनन् र काठमाडौं छँदा मेरो पढाइ हुनसकेन। अर्को कुरा जागीरे बाबुको कारणले पनि मैले पढ्न पाइन। मलाई स्कूल भर्ना गर्‍यो कि बुबा बडाहाकिम भइहाल्ने अनि उहाँसँगै जानुपर्ने। बुबा वडाहाकिम भएर वीरगञ्ज बस्दा वीरगञ्जमा स्कूल नै थिएन, भारतको रक्सौल गएर पढ्न त सकिन्थ्यो होला। त्यसबेला भारत छोडो आन्दोलन सुरू भइसकेको थियो, स्कूल जान पनि खद्दर लाएर जानुपर्ने, हामी पर्‍र्यौं अङ्ग्रेजजस्तै अङ्ग्रेजको विरोध गर्न नसक्ने। यसले गर्दा पढ्न पाइएन। त्यसपछि काठमाडौं फर्केर पाटनमा भर्ना हुन खोजँे, फेरि बुबाको हनुमाननगर (सप्तरी)मा सरूवा भयो। मैले भने नि तत्कालीन परिस्थितिले गर्दा मैले स्कूल गएर पढ्न सकिनँ। सुख-सयल, सुविधा सबै भएपनि मेरो बाल्यकाल र किशोरावस्था पढ्ने सङ्घर्षमै बित्यो, एउटा असफल सङ्घर्षमा।
वि.सं. १९९९मा बुबाको निधन भएपछि मैले जागीर खानैपर्ने बाध्यता आइपर्‍यो। लप्टन पदमा सेनामा प्रवेश गरेको केही समयमै नौ महिना शैन्य तालीमका लागि बाहिर जाने अवसर पाएँ। सेनामा छँदा मेजरसम्म बन्न पाएँ। तत्कालीन परिवेश, नेपाली काङ्गे्रसले चर्काएको आन्दोलन, राणाहरूमा देखिएको विभेद अनि मलाई घरैमा पढाउन आउने बड्ढाली मास्टरको राजनीतिक पे्ररणाले गर्दा म पनि उद्वेलित भएँ। बिहे गरेको ७ वर्ष पनि नबित्दै, सेनामा जागीर खाँदाखाँदै नेपाली काङ्गे्रसको चारतारे झण्डा लिएर म राणाशासन विरूद्ध आन्दोलनमा होमिएँ। सरकारी जागीर खाएर सरकार विरूद्ध नै आन्दोलनमा उत्रिनु जोखिमपूर्ण काम थियो, फलस्वरूप कोर्ट मार्शलको सजायँ पाई सिंहदरबारको गारदमा थुनिनुपर्‍यो। गारदमा मसँगै बालकृष्ण सम, जनार्दन सम, पवन शम्शेर, मणि शम्शेर आदि थिए। गारदमा थुनिएको एक महिना नबित्दै सात सालको क्रान्ति सफल भएपछि हामी बन्दी जीवनबाट मुक्त भयौँ। मुक्त भएपनि पनि राम्ररी बस्न सकिएन बाहिरी वातावरण झन खुला जेलजस्तो लाग्यो, जाने ठाउँ कहीँ छैन, जागीर छैन, चिन्ने मान्छे पाउन पनि हम्मे पर्‍यो। केही समय बेरोजगार भएर भौँतारिरहेको थिएँ त्यत्तिकैमा श्री ५ त्रिभुवनबाट दरबारमा बोलाई बक्सेपछि सेनामा मेरो आवश्यकता परेको मर्जी भयो र पहिलेकै मेजर पद लिएर सेनामा फर्कें।
म त्यतिबेला सेनामा सुधार गर्न गएको थिएँ। अयोग्यलाई पदबाट हटाउने, योग्यलाई राम्रो पदमा बसाउने र सैनिक सेवामा ठूलो परिवर्तन गर्ने गरी मैले कसैको अुनुहार नहेरी काम गरेँ। यसरी काम गर्दा कतिलाई राम्रो भयो, कतिलाई नराम्रो, जागीर छुटेपछि कतिको घरमा महिनौसम्म चुल्हो नबलेको पनि देख्नुपर्‍यो र अझसम्म पनि त्यो घटनाले मन नरमाइलो हुन्छ। बाध्यतावश २०११ सालमा मैले सैनिक सेवाबाट राजीनामा दिएँ र राजनीतिमा सक्रियपूर्वक लागेँ। वि.सं. २०१७ सालमा राजा महेन्द्रले नेकाको सरकार विघटन गरी राजनीतिक हस्तक्षेप गरे। यसपछि धेरैजना पक्राउ परे मैले पनि जेल बस्नुपर्‍यो। म परिस्थितिले गर्दा नेपाली काङ्गे्रसमा लागेको थिएँ। त्यतिबेला मलाई तत्कालीन प्रशासकले "मैले विराएँ" भनेर जाहेर गर्नुस् छुट्नु हुन्छ पनि भने तर मैले के बिराएको थिएँ र ? त्यसैले मैले "विश्वेश्वर बाबुको नेतृत्वमा बसेको म, उहाँले जे भन्नुभयो मैले त्यही गरेँ" भनेर लेखिदिएँ। यसपछि त मलाई यस्तो ठाडो कुरा गर्ने भनेर हप्काए।
यहाँनिर म एउटा प्रसड्ढ उल्लेख गर्न चाहन्छु। त्यो के भने २०१७ सालमा थुनामा पर्नुअघि म बस्ने घर कोपुण्डोलको बाटो राजा महेन्द्र जावलाखेलबाट र्फकँदै रहेछन् र मलाई देखेर मेरो घरमै आए। मेरो व्यवहार देखेर यी त अझै काङ्गे्रसमै झुकाव राख्दा रहेछन् भन्ने ठानी फर्केर गए। त्यसपछि त म पक्राउ परिहालेँ। ६ वर्षसम्म जेल बसियो। यसबीचमा बयान दिइरहनुपर्‍यो। एकपटक हामीसँगै जेल बसेका बलराम प्याकुरेलले अञ्चलाधीश भएर मसँग बयान लिए। त्यतिबेला मलाई "राजा मान्ने कि नमान्ने ?" भनेर सोधियो। मैले "हाम्रो पार्टीले राजालाई स्थान दिएकै छ नि।" भनेर बयान दिएपछि म छुटेँ। त्यतिबेलाको समय नै बेग्लै थियो, कडा समय, अहिलेको जस्तो कहाँ हो र ? ६ वर्ष जेल बसेर छुटेपछि काम पाइएन र तराई गएर बसेँ, तराइको गर्मीले बस्ने सकिन, काठमाडौंमा सि.आई.डी. पछि लागेर हैरान पार्थे। केही वर्ष त मैले पाउनु दुःख पाएँ।
नेपाल, भारत, चीन, पार्चुगल
↑ http://www.majheri.com/node/2360 जयदेव भट्टराईको प्रस्तुतिमा गोरखापत्रबाट साभार् गरिएको लेख: सेनामा छँदै राणाविरुद्ध जाइलागेँ
"https://ne.wikipedia.org/w/index.php?title=डायमनसम्शेर_राणा&oldid=714614" बाट निकालिएको
वि.सं. २०६७ मा निधन भएका व्यक्तिहरू
वि.सं. १९७५ मा जन्मेका व्यक्तिहरू
यो पृष्ठलाई अन्तिमपटक १५:२४, १७ मार्च २०१९ मा परिवर्तन गरिएको थियो।